Top 6 Manager File Android inay ka dhig dhammaan faylasha Well abaabulan
Android waa nidaamka qalliinka Mobile ugu fiican adduunka ee sida inta badan dadka isticmaala ay u isticmaalaan sababo ay il furan oo ku habbon .Android waa qalliinka ah mobile oo ku salaysan yaruna Linux oo ay iska leedahay Google.
Waxaa jira barnaamijyadooda kala duwan ee la heli karo ee ku shaqeeya android casriga ah ee lagala soo bixi karaa Google Play dukaanka. Maalmahan inta badan telefoonada Android Powered uu leeyahay xaddi weyn oo boos laga heli karo oo ah files badan oo xogta lagu kaydin karaa casriga ah.
Qaybta 1. Hordhac kooban oo ku saabsan Transfer File Android App
Qaybta 2. Top 5-ada kale oo ay Maareeyaha File Android
Qaybta 3. Wondershare MobileGo for Android in Maamul Android File
Qaybta 4. Buur Android Phone sida External Hard Drive in Maamul barnaamijyadooda Manager Android faylasha iyo Maamul Faylal ay ka PC
Maalmahan, waxaa tahay barnaamijyadooda badan oo la heli karo si ay u maareeyaan files ee taleefannada Android ama kiniiniga. Tababaraha File Android waa mid ka mid app sida. Tababaraha file Android waa sida sahamisa Android oo ay tahay mid ka mid ah codsiyada file maaraynta android ugu qiimeeyo iyo guul. App wuxuu bixiyaa tiro badan oo ka mid ah qaababka. Waxaa jira barnaamijyadooda kala duwan oo laga heli karo suuqa oo bixisa shaqo la mid ah, laakiin app u taagan ka hor in la barbardhigayo kuwa. Tani waa waa in ay leedahay app ah ee casriga kasta oo ay tahay mid aad u fudud in ay la tacaalaan. Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo lagala soo bixi karaa dukaanka play Google.
Download Manager File Android ka Google Play >> ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartwho.SmartFileManager&hl=en )
Waxay kaa caawinaysaa in aad dhirtuba files kala duwan oo ku saabsan telefoonada Android iyo kiniiniyada.
nidaamka qalliinka Android taageertaa nooc qaabka file kala duwan Music noocan oo kale ah, Videos, Documents, files zip, files codsiga android, iyo iyadoo la isticmaalayo app this waxaad awoodi doontaa inaad si ay u maareeyaan oo dhan files si aad u fudud.
Waxay kaa caawinaysaa in aad si ay u qabtaan falalka kala duwan sida nuqul, jaray, tirtirto, paste nidaamka file ah oo kale oo ay gacan geliyaan faylasha nidaamka daruurtii. Haddii kaarka SD la fuushanaa nidaamka markaas, app waxaa loo isticmaali karaa in ay si fudud u maareeyaan faylasha.
app Tani waxay kaa caawinaysaa in ay la tacaalaan files isticmaalaya Wi-Fi Network.
Waxaa si fudud u guraan karo files ee qaababka kala duwan, si files si fudud ayaa baadhay hoos u dhigi karo.
By isticmaalaya app this, falalka ay ka midka yihiin nuqul, koollada, tirtirto si fudud loo samayn karaa.
Waa mid aad u fudud in ay wadaagaan files isticmaalaya app this.
Faylal ay la maarayn karaa iyada oo la isticmaalayo la xidhiidha WiFi.
Mararka qaarkood bidbidayaan on qalabka tabarta yar
Versions qaarkood ma yihiin kuwo xasilloon.
Hoos waxaa ku qoran sareysa 5-ada Android oo samayn karaan wax la mid ah sida Manager File Android samayn karaa. Waxaad heli kartaa eegno ay barnaamijyadooda ka dib, iyo ka dooro mid aad ugu jeceshahay.
MAGACA APP THE
1. ES File Explorer File Manager Qiyaastii 4 MB (kala duwan leh qalab) FREE 4.6 / 5
2 File Manager (Explorer) About 5 MB (kala duwan Iyadoo qalab) FREE 4.4 / 5
3 Fayl Expert 9 Mb FREE 4.4 / 5
4 Tababare File ASTRO la Cloud About 10 Mb (duwan qalabka) Free 4.3 / 5
5 File Manager HD (Explorer) Kala duwan leh qalab Free 4.3 / 5
1.ES Manager File Explorer File
Tababare File Explorer File ES waa tababare file weyn u Android oo horumarsan by ESS App Group. Waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu soo bixi sare ee dukaanka play Google. App Tani waxaa lagala soo bixi in ka badan 30 milyan oo jeer oo ay tahay mid ka mid ah lagala soo bixi barnaamijyadooda Android hogaanka u Tababaraha file. App Tani waxay bixisaa dhowr ah oo kala duwan oo ka mid ah hawlaha. Tani waa waa in ay leedahay app oo u taagan ka tababarayaasha kale file Android kala fogyihiin.
Ka Google Download Manager File Explorer File ES Play >> ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=en )
Waa arrin aad u fudud in ay caleenta iyada oo fayl iyo files telefoonka Android oo kiniin ah.
Hawlaha aasaasiga ah ee files sida Goo, Copy, Delete iyo Jinka waxaa laga heli karaa in tababaraha file iyo tayo leh loogu isticmaali karaa.
Buugga Root ee telefoonka Android ama kiniin waxaa laga daawan karaa iyada oo la isticmaalo Tababaraha app file.
Faylal ay si fudud loo baadhi karo Tababaraha file gudahood.
App waxaa kale oo shaqo oo dheeraad ah tababaraha App sii dheer in ay soo gudbiyaan sahamisa oo ay ka caawisaa in maaraynta, xiridda iyo uninstalling barnaamijyadooda ka casriga ah.
User interface Simple.
Rich in muuqaalada.
Mararka qaarkood halka aad ka raadin files, app wuxuu noqon doonaa mid gaabis ah oo irresponsive.
Tababare 2.File (Explorer)
Iyadoo in ka badan 10,000,000 - 50.000.000 rakibtay ka dukaanka play Google, Manager File (Explorer) waxay u taagan tahay in hore ee macalinka ugu fiican ee file u Android. Waxa uu leeyahay interface user weyn iyo files ku saabsan telefoonka Android ama kiniin si fudud ku noqon karaa baadhay hoos. Waxaa ku xiri karto casriga ah adeegyada kala duwan sida daruur DropBox. Intaa waxaa dheer, waxa ay sidoo kale u dhaqmo sida Tababaraha app ah iyo barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin si fudud loo maarayn karo. Waxay leedahay UI cusub iyo hawlaha saaxiibtinimo user. Waxa ay taageertaa in ka badan 80+ noocyada file. Tallaabooyinka aasaasiga ah sida cut, nuqul iyo koollada si fudud loo samayn karaa. App wuxuu taageeraa in ka badan 28 luqadood. Noocyada kala duwan ee doorasho kala sooca ayaa lagu heli karaa app. Tani waa waa-leeyihiin app lagu maareeyo files Android.
Tababare Download File (Explorer) ka Google Play >> ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhmsoft.fm&hl=en )
Waxa ay taageertaa in ka badan 26 luqadood.
Waxa ay taageertaa FTP, FTPS IYO SFTPS server.
Waxay leedahay hawlaha kala duwan ee kala-soocid iyo doorasho xulashada badan.
Waxa ay taageertaa labada nidaam file maxalliga ah iyo kuwa fog.
App gororinaysa xasuusta.
Khabiir File waa app weyn ee maaraynta files on qalabka Android. App Tani ayaa lagala soo bixi in ka badan 10 milyan oo jeer oo ay tani waa app ee aadka loo qiimeeyo ee maaraynta files telefoonka Android ama kiniin. App waxa uu leeyahay muuqaalada kaas oo wax badan lagama maarmaan ah in aad u kala duwan yihiin.
Explorer File Download ka Google Play >> ( https://play.google.com/store/apps/details?id=xcxin.filexpert&hl=en )
Interface Tani User ee app ay tahay mid fudud oo si xataa qof aan khibradda lahayn isticmaali kartaa app this ee maaraynta files.
Waxay kaa caawinaysaa inaad si sahlan uga files ka helaan si fudud oo dhaqso.
App wuxuu abaabulaya file kasta iyo qaabab kala duwan galay categorizes kuwaas oo sanyihiin kala duwan.
Waxaad si fudud u abuuri karaan category cusub ama tags abuuro oo u fiirsada files si ay u helaan files si fudud.
Faylasha ayaa loo wadaagi karaa qalabka kale iyadoo la isticmaalayo NFC, Bluetooth iyo NFC.
App toos u helaan Music, Video, huuriyo seeb iyo Documents siinayaa.
Fayl Root si fudud ku yaalla karaa app gudahood.
App Tani si fudud u maarayn karaan faylasha nidaamka
FTP file kala iibsiga ma aha ilaa ay calaamaddu ku taal.
Tababare File 4.ASTRO la Cloud
Astro Tababaraha file app waa APK free muhiim Android Tababaraha file in madal ay Android. Inta badan khubarada ku talinaynaa app ujeedooyin rooting.
Download Manager File ASTRO la Cloud ka Google Play >> ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro&hl=en )
App Arintan waxay u sahlaysaa in aad abaabulo, ku dar, iyo tirtirto dhammaan faylasha sida music, video, waraaqaha, iyo barnaamijyadooda gudahood Android casriga ah ama adeegyada daruurtii.
App Tani waxay bixisaa adeegyada daruur. Sidaas darteed, haddii casriga la socda ee meel yar yahay ka dibna adiga oo isticmaalaya adeegga daruur gudahood app, aad guurto karo files si loo kaydiyo daruurtii oo bilaash ah ilaa meesha bannaan ee.
Faylal ay si fudud loo gudbin karaa iyada oo la isticmaalayo app this.
Interface ayaa user ee app ay tahay mid fudud.
Arrintan oo uu weheliyo sahamisa faylka waxa ay leedahay muujinta a app Tababaraha iyo feature dilaaga hawl kuwaas oo aad u muhiim u ah casriga ah.
Simple oo quruxsan oo user interface.
Waxay u baahan tahay oo kaliya version Android 2.3 iyo wax ka sareeya.
Feature Search waa mid adag yar.
Tababare 5.File HD (Explorer)
File Tababaraha HD waa mid ka mid ah Android file ugu fiican Tababaraha app kaasoo loo isticmaalo maareynta files ee Android casriga ah ee aan ka kaaftoomi kasta. Isbarbar in ay barnaamijyadooda hore, app tani waa qayb yar oo ku soo laabtay muuqaalada qaar ka mid ah.
UI ee app ay tahay mid fudud.
Waxa ay taageertaa in ka badan 25 luqadood.
App Tani waxay taageertaa labada Light iyo theme Madow. Waxaa jira taageero dheeraad ah u riixo iyo decompression.
App wuxuu taageeraa in ka badan 80+ noocyada file. Tallaabooyinka aasaasiga ah sida cut, nuqul iyo koollada si fudud loo samayn karaa.
Files APK si fudud loo furi karo oo app si fudud ku rakiban kartaa nidaamka casriga ah.
App Tani waxay taageertaa storages kala duwan sida daruur kaydinta iyo sanduuqa dhibic. App Tani waa app aad muhiim u ah maaraynta files on smartphone Android.
HD File Download Manager (Explorer) ka Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhmsoft.fm.hd&hl=en
Waxay leedahay labada mawduucyada mugdiga iyo iftiinka.
Waxa ay taageertaa doorashada Multi.
Waxay leedahay taageero ah nidaamka file maxalliga ah iyo kuwa fog labadaba.
Waxaa taageeraan tuuryo file u fudud u helaan.
Inta badan qaababka aan ahayn lacag la'aan ah oo ay leeyihiin in la siiyo u furo.
Marka loo eego in ay barnaamijyadooda kale waxaa ka maqan muuqaalada qaar ka mid ah.
Qaybta 3. Wondershare MobileGo for Android in Maamul barnaamijyadooda File Manager Android iyo Maamul Faylal ay ka PC
Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) waa tababare file dhan-in-ka mid ah qalabka Android. Sidaa daraadeed, ma waxaad maamuli kartaa oo keliya tababaraha file u barnaamijyadooda Android ka PC ah, sida ku rakibidda, uninstalling, dhoofinta, qaybsiga, tirka iyo aad u badan, laakiin sidoo kale maareeyo files Android ka PC.
Waxaa maamula xasuusta Android card SD iyo telefoonka si fudud ka PC.
Waxay awood u aad si ay u gudbiyaan music, xiriirada, waraaqaha, barnaamijyadooda, videos iyo sawiro ka kombiyuutar si ay Android casriga ah, iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad ka kombiyuutarka laftiisa qoraal in ka badan hal saaxiib.
Waxa si fudud oo taageeray ilaa SMS, app, xogta app, jadwalka taariikhda, abuse call, xiriiro iyo ka badan si uu computer iyo marka ay jiraan waxaa markaas u baahan karaa si fudud dib loogu casriga ah Android soo celiyo.
Download Manager File Android, HD File Manager (Explorer) iyo ka badan APK files of files ka Google play oo si toos ah lagu rakibay aad casriga Android.
Kuwa soo socda waa tallaabooyinka si ay u maareeyaan files ee casriga ah android ka computer iyadoo la isticmaalayo MobileGo for Android.
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare MobileGo for Android kombiyuutarka. Tallaabada 2. Isku telefoonka aad Android inay computer la cable USB ah. Dadka isticmaala Windows, aad xitaa ka dhigi kara xidhiidhka ka via WiFi.
Tallaabada 3. Ka dib markii la ogaado, aad casriga Android la soo bandhigi doono suuqa kala hoose. Tallaabada 4. Ugu geeska hoose ee bidixda, guji Google Play Apps, oo raadi barnaamijyadooda, sida Manager ASTRO File la Cloud, Manager File Android, iwm inaad kala soo baxdo si aad casriga Android. Tallaabada 5. Click Apps on column bidix, oo dhan Chine ee aad casriga ah ayaa la soo bandhigi doonaa guddi saxda ah, oo ay ku jiraan kuwa aad hadda soo bixi. Tallaabada 6. Markaas, waxaad ku rakibi karo, uninstall, gurmad, tirtirto , barnaamijyadooda la wadaago, iyo aragtida.
Tallaabada 7. By gujinaya Faylal ay ku column bidix, in aad heli karto kaarka SD iyo xusuusta telefoonka.
Markaas, aad jiidi karaan jeedi files u dhexeeya aad casriga Android iyo computer.
Qaybta 4. Buur Android Phone sida External Hard Drive in Maamul Android Files
Waxaad si fudud buuraha kartaa telefoonka Android sida drive dibadda adag si ay u maareeyaan files ku qoran kaadhka SD Android. Sidaas, waxaad si fudud u maarayn karaan music, video iyo sawiro ku yaal. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay ku xidhmaan phone Android inay PC adigoo isticmaalaya cable USB ah.
Tallaabada 1. Isku qalabka Android inay computer la cable USB ah. Tallaabada 2. Your phone Android dhowaan la aqoonsan doono. Tallaabada 3. on your computer, heli drive ee Android dibadda adag. Tallaabada 4. iyo dhammaan faylasha iyo fayl Dooro on kaarka SD Android waxaa lagu soo bandhigaa. Tallaabada 5. Markaas, waxaad bilaabi kartaa inaad soo dhoofsadaan, dhoofinta, tirtirto iyo files Kulanka Xiisaha Leh ee Android phone.
Fiiro gaar ah: Marka la tirtiro files ka Android phone, waa in aad ka taxadartaa in kiiska aad tirtirto laga yaabaa faylasha qaldan sabab u ah taxaddar.
Qaado Screenshot ah ee Android Qalabka la One Click
Sida loo Play wmv on Android Phone
Sida loo xidid Samsung Galaxy S5 in One Click
Sida loo xogta ka qalab Acer wareejiyo qalabka kale ee Android?
Top 5 Tools Android Project Management Si aad ula socoto Good ah mashaariicda
Sida loo wadaag Android Apps la Qaar kale
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiraa Android Phones
> Resource > Android > Top 6 Manager File Android inay ka dhig dhammaan faylasha Well abaabulan